Custom Printed Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Custom Printed Box)
Igwe eji ugogbe anya maka anwụ na-eji onyinye ọla ọcha
Igwe eji ugogbe anya maka anwụ na-eji onyinye ọla ọcha Onyinye ugogbe anya maka ugogbe anya maka anwụ, igbe dị mma nwere ike ịbụ nkwakọ ngwaahịa onyinye, mma na enwu. Igbe ọla maka ugogbe anya maka anwụ, na-etinye ọla ọcha, na-eme ka igbe ndị ahụ maa mma. Igbe ngwugwu maka ugogbe anya maka anwụ, igbe anwụ maka anwụ,...
Igbe mpempe akwụkwọ igbe draya onyinye na windo
Igbe mpempe akwụkwọ igbe draya onyinye na windo Igbe mpempe akwụkwọ eserese, igbe ndobe nwere igbe igbe drọwa n'èzí, ihe pụrụ iche. Igbe mpempe akwụkwọ nwere windo, igbe nwere windo PVC, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe mpempe akwụkwọ omenala, mbipụta akwụkwọ nke okike dị mma, na ihe eji ebipụta akara gị,...
hazie obere akpa tin tube box packaging
hazie obere akpa tin tube box packaging Igbe nke tube Tinyere ike maka ihe ịchọ mma, tii, swiiti wdg, akwụkwọ mmado 2mm gbakwunyere ihe ndị dị n’elu & ala, n’ime bụ agba aja aja! Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na Dongguan, China. Pụrụ iche n’imepụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ...
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Red Round Chocolate Bar packaging Box
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Red Round Chocolate Bar packaging Box Gburugburu igbe kaadiboodu na mkpuchi imewe maka Chocolate ngwugwu. Igbe mmanya koko CMYK na-ebi akwụkwọ zuru oke. Akwụkwọ mmachi 1mm gbara ọkpụrụkpụ na mkpuchi na okpu abụọ nke okpokoro akwụkwọ oyibo ga-agbasi ike iji jide Chocolate. Igbe nri mmanya mmanya...
Mpempe akwụkwọ Bulk Custom Kraft na Ribbon
Mpempe akwụkwọ Bulk Custom Kraft na Ribbon Kraft Paper Envelopu, ezigbo akwụkwọ kraft akwụkwọ nwere mbipụta akwụkwọ dị elu, sie ike mebiri. Enweta Kraft na Ribbon, ezigbo imewe ya na rịbọn, okomoko na ịma mma. Mpempe akwụkwọ Kraft Enperpe, na-ebi akwụkwọ envelopu na ụrọ rịbọn, dị mfe imeghe. Liyang Paper ngwaahịa co.,...
Akwukwo nke Chocolate Chocolate Wedding Faili Box
Mpempe akwụkwọ mkpuchi cylinder Round Kraft Tube Box Omenala akwụkwọ kraft gburugburu akpukpọ nchekwa kaadiboodu igbe nkwakọ Akara ngosi akara ndi mmadu n’ogo di na nkenke akpukpo Igbe nkwakọ ngwaahịa Chocolate Truffle Chocolate nke Onyinye Mpempe Akwụkwọ Chocolate Chocolate Box Box Chocolate Liyang Akwụkwọ Ngwaahịa...
Matte Black Custom Card Card Box Box Onyinye Ego efu
Matte Black Custom Card Card Box Box Onyinye Ego efu Igbe akpukpo ahiri mara mma nke akpukpo ukwu nke akpukpo oku di na igbe nke onyinye ibiputa onyinye onyinye Igbe mpempe akwụkwọ Black Cardboard Kwuru Ọdụ Dị Obere N'ogbe aha akara ahia ndi mmadu edere edere mpempe akwukwo kaadi akpukpo ahu Liyang Akwụkwọ...
Igbe Nkwakọ ngwaahịa Okpokoro Luchury Custom Veltiel
Igbe Nkwakọ ngwaahịa Okpokoro Luchury Custom Veltiel Nke a bụ igbe onyinye ire ere a na-ere ọkụ nke ejiri velvet na- acha odo odo nwere mmechi magnetik. Kwesịrị ekwesị maka olu, nkwakọ ngwaahịa mgbanaka. Ọ dị oke elu ma nwee ike ịpịtara gị akara ngosi dị na mkpuchi igbe. Enwere ike ịme igbe ahụ dịka nke gị. Ọ bụrụ na...
Igbe nkwakọ ngwaahịa Custom Matte Black Cardboard na windo
Igbe nkwakọ ngwaahịa Custom Matte Black Cardboard na windo Enwere PVC doro anya n’elu mkpuchi iji gosipụta ngwaahịa ndị dị na igbe windo omenala. Nkwakọ ngwaahịa matte ojii na-ebi akwụkwọ mpịakọta dị mma maka ihe ịchọ mma, ugogbe anya maka anwụ, akụrụngwa, ntutu anya, onyinye, elekere, nchịkọta chocolate. Ọtụtụ ndị...
Igbe Mpempe Akwụkwọ Red Custom na Logo
Igbe Mpempe Akwụkwọ Red Custom na Logo Igbe kaadiboodu ahia eji eme ya na mpempe ihe omuma ya na 1mm nke ihe eji egbu mmanya ; Igbe mmanya na-acha ọbara ọbara na-acha uhie uhie nwere okpu na eriri eji eme ya .Ima nma di nma ile anya kachasi nma; igbe mmanya na njiri mara nke aka gi na ezigbo mbiputa ocha; igbe mmanya...
Mpempe Akwụkwọ Cardboard White Round Box maka Ifuru
Nkwakọ ngwaahịa: K = K mbubata & mbupụ ọkọlọtọ kọfị
Akwukwo Mpempe Akwụkwọ Ederede Edereazu nke Onyinye Maka Okirikiri Igbe a na-acha ọcha gburugburu maka ngosipụta ifuru; Gburugburu igbe mere nke kaadiboodu ihe na ọla edo logo ọkụ foil stamping; Igbe okirikiri maka nkwakọ ngwaahịa okooko osisi na ebu; ọ bụ igbe onyinye ifuru dị elu. Liyang Paper Products Co., ltd bụ...
Igbe nkwakọ ngwaahịa Kraft Paper Box
Igbe nkwakọ ngwaahịa Kraft Paper Box Igbe mbugharị kuki eji mpempe akwụkwọ kraft mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ siri ike ; Igbe dị kuki dị mfe igbe otu ibe mkpuchi maka ichota kuki na mbufe ya ; Mbugharị igbe kuki igbe mbugharị dị larịị chekwaara olu mgbe ị na-ebugharị, kuki akwụkwọ Kraft mpempe akwụkwọ kuki anabata...
Pen Box Black Agba na Die Cut Lid
Pen Box Black Agba na Mkpịsị aka Die Cut Lid Pen box black colors made of fancy matte black paper and 2mm greyboard material nke kaadiboodu udidi bu ihe mkpuchi na uzo igbe di ; Igbe Pen nke mkpịsị aka ukwu mkpịsị aka ya velvet sponge insert maka otu mbukota mkpirisi na ngosi . Igbe mkpịsị odee nke nwere isi mkpịsị...
Executive Black Drawer Slide Single Pen Box
Executive Black Drawer Slide Single Pen Box Igbe mkpịsị ojii emere mma nke mpempe oji na-acha uhie uhie na mpempe akwụkwọ 2mm nke ụdị kaadiboodu bụ draị slide ; Ọdụ igbe igbe eserese igbe igbe maka igbe igbe, otu ọkwa bụ 20x5x3cm. Igbe a na-adọta drọv velvet sponge insert for Single pen packaging na ngosipụta . Igbe...
Magnet mechie Sing Box Black Pen
Magnet mechie Sing Box Black Pen Igbe ndọta magnet mere nke ọma na mpempe akwụkwọ ojii na 2mm greyboard ihe nke kaadiboodu igbe nke nwere mmechi magnet ; Black Pen igbe nwere PET velvet na-acha ọcha tinye n’ime ka mkpịsị odee dee ya. Black pen igbe velvet sponge insert maka Single pen mbukota na ngosi . Pen igbe...
Luxury Shell Pen Box Velvet Insert Igbe mkpịsị okomoko nke e ji ederede nzu na ihe 2mm greyboard art ; Igbe mpempe akwụkwọ Single onyinye na velvet ihe dị n'ime na elu ala. Ribbon gbalaga ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe iji jide ma chebe mkpịsị akwụkwọ. Akara ngosi silk na velvet na onyunyo foil stamping n’elu akwukwo...
Tea Box Red na idzọ Mgbapụta na Anya
Tea Box Pink nwere oghere na windo dị ọcha Akwukwo tea eji acha uhie uhie mee nke mpempe akwụkwọ pink na mpempe akwụkwọ na- acha uhie uhie maka mmachi tii ; Igbe tii na windo PVC doro anya n’elu maka ngosipụta nke tii ; Igbe tii na mkpuchi nabatara nha ahaziri ahazi. Achọrọ nkọwa zuru ezu iji gbakọọ ọnụahịa. Liyang...
Kraft Akwụkwọ Tea Box na Die Cut Aka
Kraft Akwụkwọ Tea Box na Die Cut Aka Igbe dị na kọfị nwere aka ịkpụ na mpịcha windo PVC, nke nwere ike ịbụ igbe dị mbugharị ka ụgbọ mmiri wee chekwaa ọnụ ahịa mbupu. Akwukwo tii tii Kraft emere nke eji eji agba aja aja kraft nke ihe akwukwo 120-300gsm maka ichota tii ; Akpa akwụkwọ ozi Kraft na ibe anwụ mpempe akwụkwọ...
Igbe ahaziri iche na-acha ọcha mara mma jewerly box with foam
Igbe ahaziri iche na-acha ọcha mara mma jewerly box with foam Igbe a na-achọ mma bụ agba ọcha na mbipụta ojii. ijiji ụfụfụ ojii gosipụta ihe omimi ya na ịma mma ya, ihe ahụ mejupụtara akwụkwọ mpịakọta 1000gsm hà n ’akwụkwọ pọmpụ 1.5mm, igbe akwụkwọ ọcha na-eme ka igbe akwụkwọ ọcha ahụ dị mma karịa, a na-eji ya maka...
Black Akwụkwọ Belt Box na Logo Stamping
Kaadị onyinye igbe kaadiboodu maka Belt Igbe eji etinye oji na-acha oji na mpempe akwụkwọ ojii na greyboard nke 2mm ọkpụrụkpụ maka Nkwakọ Belt ; The Belt Black igbe na- ese slide imewe na akara ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo na-ekpo ọkụ foil stamping . Belt igbe ojii na agba nabatara nha ahaziri ahazi. Achọrọ nkọwa zuru ezu...
Igbe Ndị A Na-ahụ Maka Obere Akwụkwọ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Obere Cardbox
Igbe Ndị A Na-ahụ Maka Obere Akwụkwọ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Obere Cardbox Obere onyinye onyinye emere na mpempe nka eji ese ihe nke akwukwo ahihia 1.5-2.5mm dika nha nke igbe drawer na nke kachasị gị mma; Obere onyinye onyinye uhie dị mfe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na eserese akara ngosi ọla edo edo edo edo edo...
PVC Sticker Custom Printed na Roll
PVC Sticker Custom Bipụtara na Roll Emere na Liyang Omenala eji aka wee bie ihe eji eme ihe Pvc kwụrụ ọnụ na mpịakọta CMYK agba agba zuru oke na-ebipụta ụdị nke gị maka ịpị igwe n’igwe gị Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na Dongguan, China. Pụrụ iche n’imepụta akwụkwọ onyinye onyinye,...
Black Printer Box Printing na ụfụfụ
Black Printer Box Printing na ụfụfụ A na-ebipụta igbe na-esi ísì ụtọ na agba ojii, akara ngosi foil stamping, n'ime bụ akwụkwọ ojii ji kechie, igbe niile na-ele anya dị oke mma ma maa mma, anyị nwere ike dịka atụmatụ gị dị ka omenala, ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị dị iche iche nke igbe na-esi ísì ụtọ, ịnabata ịkpọtụrụ. m!...